विचार – Page9– Halkaro
प्रकाशित मिति : २०७३, ९ कार्तिक मंगलवार October 27, 2016
हाम्रा अगाडि साहित्यिक प्रकाशनसम्बन्धी दुईओटा सूचना छन् । एउटा हो, ‘रसियाली सामाजिक–जनवादीहरूको सामयिक मुखपत्र राबोचेए जेलाको कार्यक्रम’ (रायोचेए जेला, अङ्क १ बाट पुनः मुद्रित) र अर्को हो, ‘श्रम मुक्ति दल१ का प्रकाशनहरू पुनराम्भ गर्ने सूचना’ । दुवै सूचना सन् १८९९ मा निस्केका हुन्, त्यसबेला “मार्क्सवादको सङ्कट” माथि बहस चलेको धेरै भइसकेको थियो । के कुरा […]
साहित्यिक इञ्जिनियरिङ्गमा सौन्दर्य र कला
क्वान्टम चिन्तन जीवन सुन्दर छ । जीवनकोलागि बनेको प्रकृति सुन्दर छ । प्रकृति र जीवनबीचको अन्तर्सम्बन्धमा देखिएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरु सुन्दर छन् । तर यो अनुभव गर्न सकिने वातावरण र जीवन–सौन्दर्य अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन दिनप्रतिदिन भत्किरहेको अबस्था नै वर्तमानको विडम्बना हो । मूलतः साहित्य जीवन–सौन्दर्यको सशक्त अभिव्यक्ति नै हो, यस अर्थमा उपयुक्त शव्दचयन, भावको […]
उनका तीन कुरा औधी राम्रा थिए । पहिलो उनको लेखाई । दोस्रो उनको व्यवहार । र तेस्रो उनको शरीर । उसले उनलाई चिनेको नै उनको लेखाईले हो । उनीसंग नजिक भएको उनको व्यवहारले । उनकै शरीरले लोभ्याएर हो उ उनीसंग यति झ्याम्मिएको । उनी काठमाण्डौंमा संघर्ष गर्न होइन, पढ्न आएकी । पछि पढ्न भन्दा बढि […]
भ्रमणका क्रममा हाम्रा तर्फबाट उच्च कुटनीतिक मर्यादा कायम भएको छ
सम्माननीय सभामुख महोदय व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु, गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले यही २०७३ साल भाद्र ३० देखि असोज ०२ सम्म गरेको भारतको राजकीय भ्रमण तथा गोवामा ३० असोज २०७३ मा सम्पन्न ’ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन’मा मेरो सहभागिताका सम्बन्धमा यस गरिमामय व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । भारत भ्रमणमा […]
कुरा हैन, खाना चपाउनुस्
कतिपय मानिसको शैली हुन्छ, कुरा चपाउने । तर, खाना भने पुर्ण रूपमा नचपाइ निल्ने। खाना चपाएर नखादा शरिरलाई दश प्रतिशत मात्र उर्जा मिल्छ। बाँकी ९० प्रतिशत खाना राम्रोसँग नपचेर खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै खाना खादैमा उर्जा मिल्छ भन्नु गलत हो। अब यो खाने शैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। हामीले खाना शरीरको उर्जाको लागि खाने हो। धेरै […]
दशैँ र क्रान्तिकारी भनौंदा कामरेडहरू
प्रकाशित मिति : २०७३, २६ आश्विन बुधबार October 18, 2016
एक हिसाबले अब दशैँ सकियो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास राख्नेहरूले यस्ता चाडपर्वहरूलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने बहस र छलफलहरू हिजोका दिनदेखि नै चलेका हुन् । पुर्वीय र पाश्चात्य समाजको चरित्र र मूल्यअनुसार चाडपर्वहरूको प्रकृति र मूल्य फरकफरक भएपनि प्रत्येक समाज, जातजाति र समुदायसित चाडपर्वहरू अभिन्न रूपमा गाँसिएका छन् । चाडपर्वहरूको सान्दर्भिकता, आवश्यकता, औचित्य निरपेक्ष […]
प्रकाशित मिति : २०७३, ८ आश्विन शनिबार October 5, 2016
१. बिषय प्रवेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एकबर्ष पूरा भएको छ । विगत एक बर्षको समीक्षा गर्दा निश्चयनै केही प्रश्नहरु प्रकट हुन्छन् । त्यसैले प्रश्नहरुबाटै बिषय सुरु गरौं । नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन किन ? यो समकालीन राजनीतिको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न हो । यो […]
संविधान संशोधनले संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने छ
प्रकाशित मिति : २०७३, ३ आश्विन सोमबार October 5, 2016
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीगण, विशिष्ट अतिथिहरू तथा समारोहमा उपस्थित समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू । नेपालको संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सवको यस शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आफैबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक […]